Mahad Alle ayey u sugnaatay, Rasuulkeenii Muxamed,nabad galyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, Khulaafu’ Raashidiintii iyo intii raacdee xaqa ku rumeysay Illaahey raali ha ahaadee. Intaa dabadeed
Furaashkuu ku jiifo, qofkii gacan u qaadee, xaga dambe badh soo rogey. Markuu cagaha laabtee, jilbihiisa madaxiyo calooshiisa hoos dhigo, cidhiidhiguu is geliyiyo, cadibaada daba taal, aqoontuu ka korodhsaday, isagaa u cilmi leh. Waxa dunida hawl taal, ee qallin lagu tilmaamiyo, lagu koobi karin hadal, waxay siyaasad oo qudha, dadku isugu koobeen, iyagaa u cilmi leh. Muraayadaha wax daabaca, ee wararkii dalkeeniyo, lagu qoro maqaalladu, wuxuu qallinkoodu diintiyo, qur´aan uga bakhaylay, iyagaa u cilmi leh. Balse damiirkeenu muu noqon, mid Axaadiista diintiyo, Aayadaha ilaahay, ka dabooshay maqalkoo. Qudbadaha Ina Yusuf, hadallada digtoorradu ilmadooda daadshaan.
Hadii dadka saxaafadan casriga ah gacanta ku haya, wakhtigana u helay noqdeen qaar ilaaliya qaranimada iyo sumcadda siyaasadda, heeganna u yihiin dhawristeeda iyo fidinteeda, maxay dadkii akhristayaasha ahaa uga faa´ iideysan waayeen inay kaga hadlaan duruufohooda wejiyada badan leh. Qof kastaaba wuxuu leeyahay meel loogu hagaago oo laga helo si loo gaadhsiiyo farriin wax uga tarta maalinta aduunyo iyo maalinta aakhiro. Maxay culimadii diinta taqaanay uga baaqsadeen inay dadkooda kula kulmaan muraayadahan la iska akhristo si ay u gaadhsiiyaan kelmed ka fogaysa cadaabka Eebe, kuna dhaweysa naxariistiisa. Waxa hubaal ah in la heli karo qof maalintii laba jeer amma ka badan booqda muraayadaha wax laga akhristo, balse sababo jira awgeed aanay u suurto gelin inuu maalintii hal mar booqdo goob kamid ah goobaha Eebe jecel yahay.
Dunida laguma sheegin ummad wada sheekh ah, Soomaaliyana ubadkeeduna maaha kuwo ku soo dhashay iyagoo diintooda, dhaqankooda iyo taariikhdoodaba dusha ka haya. Maqaleey warlaay, ma laguu warramay, in Cali la diley, oo Cumar la dilay…. Ubadka ku nool dhulka miyiga ah ee ay yar tahay siday ula kulmaan macallin diintooda bara, ayaa hadana hees ay maqasha ku raacaan lagu gaadhsiiyey taariikhda asxaabtii Nebigeenii suubanaa NNKHA. Innaguna maanta inagoo ka awood iyo qalab badan, hadana inaynu ubadkeenna nasiibkooda oo qudha intaynu shandad ugu ridno, dhabarkana u saarno, ku nidhaa iskuulka taga waa arrin murugadeeda leh, balse Badbaadiyihii abuuray isagaa badbaadin.
TELL: + 27 11 837 0891